Qtues Apk Download Ho an'ny Android [2022 All Movies] | APKOLL
Qtues Apk Download Ho an'ny Android [2022 Sarimihetsika rehetra]
Salama ry mpankafy fialamboly, miverina indray izahay miaraka amin'ny fampiharana Android hafa mahagaga ho anareo rehetra, antsoina hoe Qtues. Io no fampiharana Android farany indrindra, izay manolotra angon-drakitra be dia be amin'ny sarimihetsika Hollywood sy Bollywood, andian-tantara an-tranonkala, ary horonan-tsary fohy ho alefa maimaim-poana.
Araka ny fantatrao dia tia mandany fotoana malalaka amin'ny fialamboly ny olona. Noho izany fampiharana Android an-taonina no novolavolaina teny an-tsena, izay manolotra sasany amin'ireo fanangonana tsara indrindra. Saingy ireo fampiharana rehetra ireo dia misy amin'ny fampiasana vola na premium. Noho izany, mila mandoa vola amin'ireny ianao.
Ireo fampiharana maimaimpoana dia misy ihany koa eny an-tsena, saingy noho ny lesoka sasany sy ny atiny voafetra, dia mamporisika an'ity fampiharana ity izahay. Ao amin'ity rindrambaiko ity dia misy endri-javatra an-taonina maro ho anao izay tsy natolotry ny fampiharana premium fotsiny. Izahay dia hizara ny antsipiriany rehetra amin'ity fampiharana ity.
Noho izany, raha vonona hampiasa an'ity rindranasa ity ianao, dia amporisihinay ianao hahafantatra momba izany. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao dia mijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy. Raha manana olana amin'ny fampiasana an'ity fampiharana ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay. Hanolotra vahaolana amin'izany izahay. Noho izany, andao ho fantarina ny momba azy.
Topimaso momba ny Qtues
Izy io dia fampiharana Android Entertainment, izay manolotra fanangonana sarimihetsika, andian-tranonkala ary horonan-tsary fohy. Izy io dia manome ny atiny Hollywood sy Bollywood nivoaka farany izay azonao alefa ary alefanao koa hijerena ny toe-tsaina ivelan'ny Internet.
Ny Qtues App dia manome rafitra fanasokajiana tsara indrindra, izay anasokajiana ny atiny rehetra amin'ny fomba tsara indrindra. Azonao atao ny mahita ny andian-tranonkala rehetra ao amin'ny sokajy tranonkala, sarimihetsika ao amin'ny fizarana sarimihetsika, votoaty ho an'ny olon-dehibe ao amin'ny fizarana olon-dehibe, ary horonan-tsary fohy ao amin'ny sokajy misy azy.
Ao amin'ny fizarana Short-Video dia hahita horonantsary kely ianao, izay mazàna manome horonan-tsary manentana, olon-dehibe, tantaram-pitiavana ary tantaram-pitiavana. Io no sokajy tsara indrindra hijerena ireo horonan-tsary rehetra amin'ny fotoana farafahakeliny. Afaka mahazo fialamboly tsara indrindra ianao amin'ny fiatoana kely.
Ny kalitaon'ny fampisehoana dia tsara ihany koa. Azonao atao ny manova ny kalitaon'ny fampisehoana arakaraka ny fifandraisana Internet. Raha mampiasa Internet haingam-pandeha ianao dia afaka mandeha amin'ny HD feno. Fa raha mampiasa Internet miadana sy voafetra ianao, dia azonao atao ny mampihena ny kalitaon'ny fampisehoana.
Qtues Movie App dia manome atiny azo sintonina ihany koa, izay mazàna tsy misy amin'ny fampiharana maimaimpoana. Azonao atao ny misintona andian-tranonkala, sarimihetsika na horonan-tsary ary mijery azy ivelan'ny Internet. Ny maody ivelan'ny tsipika dia manana teboka iray pulsa ho an'ireo mpampiasa internet tsy mendrika mety hijerena ny atiny rehetra raha tsy misy buffing.
Misy endri-javatra maro kokoa ao Movie App, izay azonao jerena amin'ny fidirana amin'ity app ity. Noho izany, misintona fotsiny Qtues Apk ary manomboka mampiasa azy io. Raha manana olana amin'ny fampidinana ity fampiharana ity ianao dia mifandraisa aminay.
Anaran'ny fonosana media.appsmediaprtvideo.qtues
Ny sasany amin'ireo endri-javatra dia voalaza ao amin'ny fizarana etsy ambony, saingy misy zavatra hafa azonao trandrahana sy zaraina aminay. Azonao atao ny mampiasa ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany mba hizaranao ny traikefanao aminay. Ao amin'ny lisitra eto ambany dia hizara ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe amin'ity fampiharana ity izahay.
Fanangonana andian-dahatsoratry ny tranonkala sy sarimihetsika anisan'izany ny farany sy ny taloha
Ny Display Quality dia afaka miova tanana sy mandeha ho azy
Ny fampisehoana avo lenta dia misy
Azo sintonina daholo ny atiny ato amin'ity app ity
Tsy misy doka na pop-up
Tsy misy io ao amin'ny Google Play Store, fa hizara rohy miasa azo antoka sy azo antoka amin'ity fampiharana ity izahay rehetra. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay misy eo amin'ny ambony sy ambany eto amin'ity pejy ity. Tsindrio izany ary andraso ny fizarana vitsivitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Qtues no fampiharana Android tsara indrindra handanianao fotoana kalitao amin'ny fialamboly tsara indrindra. Misy sarimihetsika, andian-tantara amin'ny fahitalavitra, ary atiny ho an'ny olon-dehibe. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary zahao ny anay tranonkala ho an'ny fampiharana mahatalanjona kokoa.
Sokajy Apps, Entertainment Tags Movie App, Qtues, Qtues Apk, Qtues App Post Fikarohana